यस्ता छन् गाँजर खानुका फाइदाहरु
स्वास्थ्य अवस्था मजबुद बनाउन खानासँगै सलादको सेवन एकदमै राम्रो मानिन्छ । कतिपयलाई सलादमा के सेवन गर्ने भन्ने जिज्ञासा पनि हुन सक्छ । सामान्यतयाः सलादमा काक्रो, मुला, गाँजर सेवन गरिन्छ । यी सबै खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ । यस मध्येको गाँजर सलादका रुपमा प्रयोग गर्नु सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । गाँजरका फाइदा गाँजरमा भिटामिन ए […]
झुठो बोल्ने बच्चालाई यसरी बदल्नोस् गलत बानी
साना बच्चाले गरेका कतिपय कुरा हामी सहजै पत्याइहाल्छौँ । तर उनीहरुले गरेका कतिपय कुरा झुठा पनि हुन्छन् । ढाँट्ने बानी परेका बच्चाका कारण कतिपय अविभावक तनावमा पर्ने गरेका छन् । आफ्नो बच्चाको बानीलाई सुधार्न उनीहरुलाई निक्कै मुस्किल परिरहेको हुन्छ । तपाई पनि यस्तै समस्या झेलिरहनु भएको छ भने केही उपाय अवलम्बन गर्न सक्नु हुनेछ । […]
गाईको दूध बढी पोसिलो की भैंसीको, जानिराखौं
दूध आफैंमा एक पोषणयुक्त पेय (खानेकुरा) हो । दूधमा धेरै मात्रामा क्याल्यिसम पाइन्छ । जो हड्डी र दाँतका लागि आवश्यक हुन्छ । स्वस्थ रहनका लागि चिकित्सकहरुले पनि नियमितजसो दूध पिउन सल्लाह दिन्छन् । दूधको कुरा गर्दा गाई या भैंसी, कसको दूध बढी फाइदाजनक हुन्छ भन्ने विषय पनि उठ्ने गर्छ । गाई या भैंसीको दूधका आ–आफ्नै […]
कान छेड्दा के-के फाइदा!
पछिल्लो समय युवा पुस्ताले कान छेड्नुलाई फेसनकै रुपमा विकास गरेका छन् । पहिला गहना लगाउनका लागि नेपाली महिलाले कान छेड्ने गरेको भएपनि अहिले केटा केटी, महिला पुरुष सबैले कान छेड्ने गरेका छन् । कसैले रहरले कसैले करले कान छेडे पनि त्यसको स्वास्थ्यका लागि भने फाइदा पुर्‍याउने एक अध्ययनले देखाएका छ । कानको लोतीमा हुने एक […]
यस्तो छ हाँस्नुका फाइदाहरु
स्वस्थकर जीवन जिउनु तथा मेहेनतको कमाइ खानुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । हाँसेर जिन्दगी जिउन पाउने भाग्यमानीहरू कमै हुन्छन् । किनकी यो दुनियामा एउटा न एउटा दु:ख नहुने मानिस को होला र ? तर साधै दु:खी बनेर पनि त भएन । हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्यलाई समेत कदर गर्दै आएको छ […]
रक्सीको ‘ह्याङओभर’ वाट वच्ने उपायहरु
कहिलेकाहीँ पार्टीमा बढी नै रक्सी पिउँदा भोलिपल्ट बिहान टाउको भारी भएको अनुभव हुन्छ । छटपटी जस्तो हुने अनि बान्ता आउला जस्तो हुने स्थितिलाई ह्याङओभर भनिन्छ । खासमा पार्टीमा धेरै मात्रामा वा फरक फरक किसिमका रक्सी पिउँदा बिहान ह्याङओभर हुन्छ । यस स्थितिमा एल्डोस्टेरोन र कार्टिसोल जस्ता हर्मोनहरूको स्तरमा परिवर्तन आउँछ र यसैकारण ह्याङओभर हुन्छ । […]
चुइंगम पेटमा पुग्यो भने के हुन्छ ?
चुइंगम पेटमा पुग्यो भनेर डराउनु नपर्ने रहेछ । नयाँ अध्ययन अनुसार, चुइंगम पच्छ पनि अनि त्यसले हाम्रो स्मरणशक्ति पनि बढाउँछ । चुइंगम निलिएमा डराउनुपर्दैन किनकि यो अन्य खानाजस्तै पच्छ तर यसको पाचनमा अलि बढी समय लाग्छ । हाम्रो पाचनप्रणालीमा भएका एसिड र एन्जाइमहरूले यसलाई पचाउन मद्दत गर्ने गर्छ । यो व्यक्तिको फरक फरक पाचनप्रणालीमा निर्भर […]
घिउ पौष्टिक पदार्थ हो। यसलाई जुनसुकै तरिकाले खान सकिन्छ । भात, तरकारी, दालरोटी र परौठा बनाउनका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।शुद्ध जातका गाईभैँसीका मिसापट नगरिएको घिउले मानिसलाई बल प्रदान गर्नुका साथै आरोग्य र दीर्घायु प्राप्त हुन्छ । औषधी उपचार खानामा अरुची भएमा आँखाको कमजोरीमा कपाल दुखेमा जाडोले कामज्वरो आएमा सेतो दुवी आएमा ओठ फुट्ने भएमा आँखा […]
हामीले मुख धुँदा गर्न हुने न नहुने कामहरु
विहान उठेपछि फ्रेस भएर मुख धुने बानी सबैको हुन्छ । दैनिक विहान मुख धुनु स्वास्थ्य तथा सरसफाइका दृष्टीबाट पनि राम्रो हो । तर विहान मुख धुने बेलामा कतिपयले जानेर या नजानेर गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । जुन गल्ती स्वास्थ्यका हिसावमा हेर्दा राम्रो मानिदैन । गर्न हुने न नहुने कामहरु सके सम्म तातो र धेरै चिसो पानीले […]
बिहान भूलेर पनि गर्न नहुने कामहरु
हामीले बिहान राम्रो काम गरौँ भने दिनभरको समयमा उर्जा प्राप्त हुन्छ । यदी हामीले बिहानै काम राम्रो गरेनौँ भने दिनभर पनि हाम्रो मनस्थितमा त्यसको असर पर्ने गर्दछ । बिहान भूलेर पनि गर्न नहुने काम ढिलोसम्म सुत्ने अचानक ओछ्याउनबाट एक्कासी उठ्ने उठेर पानी नपिउने व्यायाम नगर्ने ओछ्यानमै चिया पिउने बिहानको खाजा नखाने धेरै गुलियो खाने बिहानको […]
मनलाई स्वस्थ राख्ने उपायहरु
टेन्शन या स्ट्रेस कमभन्दा कममा रहनुस् । दैनिक स्नान गर्नुस् । प्रतिदिन व्यायाम गर्नुस् । खूब पानी पिउनुस् । रसदार फल जस्तै – सुन्तला, स्याउ, आप, केरा इत्यादि रोज खानुस् । सफा, शुद्ध र पौष्टिक आहार खानुस् । जंक फूड जस्तै कि बर्गर, पिजा आदि कम खानुस् । यदि टेन्शन हदभन्दा ज्यादा हुदैछ भने कुनै […]
छिट्टै प्रेममा पर्छन् यी राशि भएका व्यक्ति
कर्कट राशि प्रेममा विश्वाससिलो, सम्बन्धप्रति इमान्दार र प्रेमको अनुभूति गराउँन आउँछ यी राशिका व्यक्तिलाई । यी राशिका व्यक्ति निक्कै संवेदनशील हुन्छन्, त्यसैले जो राम्रो व्यवहार गर्छ, सम्भव त ऊसलाई मन पाराउँन थाल्छ । मिथुन राशि यस राशिका व्यक्ति एकदमै छिटो प्रेममा पर्ने गर्छन् । कसैको कुनै पनि कुरा राम्रो लागेमा आकर्षित भइहाल्ने र भविष्यबारे सपना […]
आफैं उडेको सपना देखे के हुन्छ ?
हरेक मान्छेले विभिन्न खालका समपनाहरु देखिन्छन् । कतिपय मानिसहरु अहिले पनि सपनामा देखिएका कुरालाई लिएर डराउने गरिन्छ । अनि कहिले काँही त एकदमै अनौठो प्रकृतिको पनि हुन्छ । कतिपयले आफैं मरेको सपना पनि देख्नछ । अनि कतिपयले अलिक असामान्य गरि सपनामा उडेको, नयाँ नौलो ठाउँमा गएको, नयाँ मान्छेसँग भेट भएको पनि देख्छन् । आफुँले चाहेको […]
यदि तपाई अदुवा रोप्दै हुनुहुन्छ भने यी तरिकाहरु प्रयोग गर्नुहोस्
अदुवा विशेषगरी हामी तरकारीहरुमा मसलाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएको हुँदा यो लोकप्रिय नगदेवाली हुन पुगेको हो । बजारमा अदुवाको राम्रो मूल्यमा बिक्री रहेको छ । तरिकाहरु यो चैत्र/बैशाख महिनामा रोपिन्छ । यो खेती गर्नका लागि सामान्यतया पानी नजम्ने दुमट किसिमको माटो उपयुक्त हुन्छ । बारी जोतेर राम्रोसँग डल्ला फोरी माटोलाई बुर्बुर किसिमको बनाउनु पर्दछ। […]
दही खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा हुने औषधि उपचारहरु
दुधको सट्टा दही खानु स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ । दुधमा पाइने ‘फ्याट’ शरिरलाई एक उमेरमा गएपछि हानी गर्छ । दहीमा पाइने फोस्फोरस र भिटामिन डी शरिरको लागि लाभकारी हुन्छ । दैनिक ३ सय मिलीलीटर दही खाने गरेमा ओस्टियोपोरोसिस, क्यान्सर, हार्टअट्याक र अन्य पेटको विकार विरुद्ध सुरक्षा गर्छ । दहीको सेवनले शरिरलाई शितलता प्रदान गर्छ […]
अदुवाका औषधि उपचारहरु
अदुवा हामी मसलाको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छौं । अदुवाले खानाको स्वाद बढाउन मद्धत गर्छ । अदुवालाई आयुर्वेदमा औषधि बनाउनको लागी प्रयोग गर्ने गर्छौं । अदुवालाई हामी घरेलु उपचारको लागी विभिन्न समस्याहरुले सताउँदा प्रयोग गर्न सक्छौँ । त्यसैले यो हाम्रो लागी निकै फाइदाजनक छ । अदुवालाई हामी काचैं पनि चपाउन सक्छौँ । यसलाई चियामा हालेर पनि […]
हाम्रो स्वास्थ्यमा मेवावाट हुने औषधी उपचारहरु
अन्य फलफूलको तुलनामा मेवा निकै स्वस्थ फल मानिन्छ । यो फल पेट तथा मुटु दुबैको लागि निकै लाभदायी हुन्छ । बजारमा सहज रुपमा पाइने र गाउँघरमा पनि सहजै फलाउन सकिने सस्तो फल पनि होे । मेवा देख्न र खानमा जति मीठो हुन्छ यो त्यत्तिकै गुणकारी पनि हुन्छ । मेवाका औषधी उपचारहरु जिब्रो फुटेमा अल्काई भएमा […]
महिलाहरुको शरीरमा सेता धर्सा आउनुका कारणहरु
अधिकांश महिलाको शरीरका विभिन्न भागमा सेता धर्सा देखिन्छ । पेट, हिप, पिँडौला, स्तनआसपासको छालामा सेता धर्सा बाक्लै हुन्छन् । छालामा आउने यस्ता सेता धर्साका कारण युवतीहरू बढी चिन्तित बन्ने गरेको पाइन्छ । के हो सेता धर्सा ? शरीरका विभिन्न भागमा छालामा देखिने सेता धर्सालाई ‘स्ट्रेच माक्र्स’को नामले चिनिन्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा ‘स्ट्रिया’ भनिन्छ । […]
हाम्रो अनुहारमा आएको डण्डीफोरका प्रकारहरु
अनुहारमा आउने समस्यामध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पिम्पल्स अथवा डण्डीफोर आजको आम समस्या हो । तर के तपाईलाई थाहा छ ? डण्डीफोर पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् र यसको उपचार विधि फरक फरक विधिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । डण्डीफोर समग्रमा चार किसिमका हुन्छन् । कतिपय सजिलै ठीक हुन्छन् भने कतिपय एकदमै लामो समयसम्म देखिन्छन् । यदि […]
सखरवाट हार्मो स्वास्थ्यमा हुने औषधी उपचारहरु
खुको रस पकाएर जमाएपछि सखर बन्छ । गुलियो सखर खाँदा तत्कालका लागि शक्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यसलाई औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गरिने कुरा कमैलाई थाहा हुन सक्छ । सखरवाट हार्मो स्वास्थ्यमा हुने औषधी उपचारहरु कम्मर दुख्ने रोगमा ज्वरो आएमा हात्ती पाइले रोगमा खोकी र दममा कफ र घाँटी बसेमाखोकी लागेको रोगमा पेट दुखेमा मलेरिया […]